Waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa si kulul ucambaaraysay doorashooyinkii iskasoo horjeeday ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
dil qorshaysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha dhexe.
0 Wednesday August 14, 2019 - 13:43:47
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal naf hurnimo oo maanta ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose.
0 Wednesday August 07, 2019 - 07:14:31
0 Saturday August 03, 2019 - 10:05:44
Bisha Dul xaj oo ah Bil Fadli Badan waxaa kujira Maalmo gaar ah oo ah kuwa ugu fadli badan maalmaha alle muslimiinta siiyay.
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in markale qaraxyo lagu weeraray ciidamada shisheeyaha AMISOM ee duullaanka gardarrada ah ku jooga dalka Soomaaliya.
0 Thursday August 01, 2019 - 09:47:21
Cabdi Raxmaan Yariisoow oo ahaa guddoomiyaha iyo duqa magaalada Muqdisho kaas oo si xun ugu dhaawacmay weerar ay fulisay Xarakada Al Shabaab.
0 Wednesday July 31, 2019 - 21:43:35
0 Saturday July 20, 2019 - 08:14:01
Xoogag hubeysan ayaa caawa maqribkii sarkaal sare oo katirsan ciidamada booliska dowladda Federaalka ku dilay gudaha magaalada Muqdisho.
0 Saturday July 20, 2019 - 08:01:19
Xoogaga Al Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro hor leh ku qaaday saldhigyo melleteri oo kuyaalla gobollada Gedo iyo Shabeellaha Hoose ee Koonfurta dalka Soomaaliya.
0 Saturday July 20, 2019 - 07:19:55
Magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud waxaa lagusoo bandhigay ciidamo hor leh oo ka goostay maamulka isku magacaabay Hirshabelle ee kajira gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe.
0 Thursday July 18, 2019 - 11:36:38
0 Friday July 12, 2019 - 08:25:32
Dagaalyahanada Al Shabaab ee dagaalka xooggan uga jira dhismayaasha Hoteel kuyaal magaalada Kismaayo ayaa si adag isaga difaacay weeraro isdaba joog ah oo uga yimid ciidamo Kenyaan ah iyo maleeshiyaadka maamulka Jubbaland.
0 Friday July 12, 2019 - 08:23:34
0 Wednesday July 10, 2019 - 10:21:50
Cabdi Casiis Laftagareen oo ah hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay Koonfur Galbeed ayaa booqasho dhanka cirka ah ku tagay magaalada Marka ee xarunta Shabeellaha Hoose.
« Prev1 ... 3456789 ... 209Next »